तिम्रो पतिले तिमीलाई जुवामा हारिसकेका छन्’ तिमी अब हाम्री भयौ भन्दै ब ल त्का र …. – Jagaran Nepal
तिम्रो पतिले तिमीलाई जुवामा हारिसकेका छन्’ तिमी अब हाम्री भयौ भन्दै ब ल त्का र ….
जु,वा खेल्ने व्यक्तिले केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने एक उदाहरण बनेको छ, भारतमा घ,टित एक घ,टना । जु,वा मा नगद गुमाइसकेका एकजनाले पत्नीलाई नै दा उमा राखेर जु,वा खेलेका छन् । र जित्ने भनिएका दुई जनाले घरमै गएर महिलालाई सा मू’हिक क र णी गरेको घ,टना प्रकाशमा आएको हो । इन्दौरको राउ निवासी ३८ वर्षीया महिलाले हालै प्रहरीको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आफ्नो पी’ डा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
१४ वर्षअघि पीथमपुर निवासी किशोर नाम गरेका युवकसँग आफ्नो विवाह भएको र चार सन्तानसमेत रहेको जानकारी दिदैं ती महिलाले पतिले क,थित रुपमा जु,वामा आफूलाई हारेपछि दुई जनाले सामूहिक क र णी गरेको जनाइन् ।
उनका अनुसार ती दुई पुरुष घरमै आएका थिए । त्यतिबेला उनको पति भने घरमा नरहेको बताइन्छ । छोराछोरी भएकै समयमा घरमा आएर उनीहरुले आफूलाई ‘तिम्रो पतिले तिमीलाई जुवामा हारिसकेका छन्, तिमी अब हाम्री भयौ,’ भन्दै क र णी गरेको उनले बताइन् ।
सो घ,टनापछि आफूले घर परिवर्तन गरेको र अलग्गै बस्न थालेको बताइन् । तर पति र ती दुई पुरुषले बारम्बार आफूलाई दुःख दिने र ध,म्क्याउने गर्दै आएको भन्दै महिलाले प्रहरीसमक्ष गुनासो गरेकी छन् । ती महिलाका उनका पतिले छोरीलाई समेत जु,वाको दाउ राख्ने ध,म्की दिँदै आएका छन् ।
इन्दौरको प्रहरी उपमहानिरीक्षक कार्यालयमै आयोजित कार्यक्रममा महिलाले आफ्नो पी’ डा सुनाएपछि प्रहरीले सो घ,टनाको छानविन थालेको छ । इन्दौरको पूर्वी क्षेत्रका प्रहरी प्रमुखले सम्बन्धित प्रहरी थानालाई छानविनको जिम्मेवारी दिइएको जनाएका छन् ।